नेपाल एक स्वतन्त्र मुलुक हो ,त्यसैले कुनै पनि मुलुकले नेपालको आन्तरिक मामिलाम हस्तक्षेप गर्न पाउदैन : चिनियाँ राजदुत होउ यान्छी…हेर्नुहोस।
काठमाडौ : नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले नेपाल एउटा स्व,तन्त्र मुलुक रहेको र कुनै पनि मुलुकले नेपालको आन्तरिक मामिलामा ह,स्तक्षेप गर्नु नहुने बताएकी छिन् ।
पछिल्लो समय नेपालको आन्तरिक मा,मिलामा चीनको ह,स्तक्षेप बढेको आ,रोप लागिरहँदा उनले मुलुकबीच विकास र द्विपक्षीय सहयोगबारे वि,चार आ,दानप्रदान हुनु भनेको एउटा सामान्य कू,टनीतिक कार्य भएको र सामान्य भे,टघाट एवं फोन संवादलाई पनि आन्तरिक मामिलामा ह,स्तक्षेपका रूपमा लिने नहुने जि,किर गरेकी हुन् ।
नयाँ पत्रिकाका लागि नरेश ज्ञवालीसँगको अन्तरवार्तामा उनले भनेकी छन्, ‘नेपालको छिमेकी मित्रका रूपमा हामी नेपालले स्थायित्व र एकता कायम राखेको हेर्न चाहन्छौँ । जुन राष्ट्रिय विकासको पूर्वसर्त हो । नेपाले सरकारले ‘स,मृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को ना,रा अघि सरेको छ र आफ्नो सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डताको सु,रक्षा गर्न कटिबद्ध छ ।
हामी नेपालको प्रयासको सम्मान र समर्थन गर्छौँ ।उनले कालापानीको मु,द्दा नेपाल र भारतबीचको विषय भएको पनि स्पष्ट पारिन् । हामीलाई आशा छ, दुई मुलुकले आफ्ना असहमति मित्रवत् छलफलमार्फत ठीकसँग सुल्झाउनेछन् । र, परिस्थितिलाई ज,टिल बनाउन सक्ने कुनै पनि एकपक्षीय का,रबाहीबाट जोगिनेछन् भन्नेमा हाम्रो विश्वास छ,’ उनको भनाइ छ ।
उनले नेपाल र भारतबीचको वि,वादमा चीनलाई अनावश्यक ढंगले मुछ्ने प्रयास भइरहेको पनि जि,किर गरिन् । ‘मैले के नोटिस गरेकी छु भने जब–जब नेपाल–भारतबीचको सम्बन्धमा उ,तारचढाव आउँछ, त्यसमा चीनलाई तान्न केही शक्तिले प्रयास गरिरहेका हुन्छन् । उनीहरू हुँदै नभएका विषय रचना गरेर अफवाह फैलाउन थाल्छन् । यसले हामीलाई एकदमै अलमल पार्ने गरेको छ ।
यी हर्कतले चीन–नेपाल मित्रताको समग्र स्थितिलाई खलल पुर्याउनेछैन भन्नेमा म वि,श्वस्त छु,’ उनले भनिन् ।नेपाल र चीनबीच हस्ताक्षर भएदेखि नेपाल आधिकारिक रूपले नै बिआरआईको एउटा महत्वपूर्ण सहभागी बनिसकेको स्पष्ट पारिन् ।
त्यस्तै, एमसिसीको कुरा त्यो नितान्त नेपाल र अमेरिकाबीचको विषय भएको बताउँदै उनले म बिआरआईलाई एमसिसीसँग तु,लना गर्न नचाहेको बताइन् । ‘क्षेत्रीय शान्ति र स्था,यित्वका लागि नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय हि,तका आधारअनुरूपको छ,नोट गर्नेमा हामीलाई विश्वास छ,उनको भनाइ छ।
Previous भारतीय छिर्न नपाउन सीमानाकामा थप कडाइ गर्न मुख्यमन्त्रीको निर्देशन…हेर्नुहोस् । सेयर गरौ !
Next बिजय शाही बारे महाबीर पुनले मुख खोले ! सुत्र होइन बास्तबिकता अर्कै रहेछ…हेर्नुहोस् ।(भिडियो सहित)